November 2018 – AsiaApps
Google Assistant အတွက် အသစ်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ Pretty Please Feature
November 30, 2018 November 30, 2018 minn2unApp NewsNo Comment on Google Assistant အတွက် အသစ်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ Pretty Please Feature
Android 6.0 (Marshmallow) ကစပြီး ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ Google Assistant ဟာ Android ရဲ့ အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို Voice Command နဲ့ တင်ပြီးမြောက်စေပါတယ်။ Message ပို့တာ၊ Typing ရိုက်တာ၊ Alarm…
Display နှစ်ခု ဒီဇိုင်းနဲ့ ထွက်ရှိလာဖို့ရှိတဲ့ Vivo Nex2
November 30, 2018 MoonSmartphone NewsNo Comment on Display နှစ်ခု ဒီဇိုင်းနဲ့ ထွက်ရှိလာဖို့ရှိတဲ့ Vivo Nex2
ထူးခြားတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို အမြဲဖန်တီးလေ့ရှိတဲ့ Vivo ဟာ အခု တစ်ခေါက်မှာလည်း ထူးခြားတဲ့ ဒီဇိုင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးလိုက်ပြန်ပါပြီ။ Pop-up ကင်မရာလိုပဲ ဒီတစ်ခေါက် သူ့ရဲ့ ဖန်တီးချက်ကလည်း တော်တော်လေး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်က ထူးထူးခြားခြား…
Zip ဖိုင်​​တွေကို အလွယ်​တကူဖွင့်ပေးနိုင်​တဲ့ RAR
November 30, 2018 Ko HtetReviewsNo Comment on Zip ဖိုင်​​တွေကို အလွယ်​တကူဖွင့်ပေးနိုင်​တဲ့ RAR
ကျွန်​​တော်​တို့အွန်​လိုင်​းက​နေ ဂိမ်​းဖိုင်​​လေး​တွေ (ဒါမှမဟုတ်​) တစ်​ခြားဝက်​ဘ်​ဆိုဒ်​​တွေက​နေ သီချင်​း​တွေ စာအုပ်​​တွေ​ဒေါင်းလုတ်​ဆွဲကြတဲ့အခါ ပုံမှန်​ဖိုင်​အတိုင်​းမလာပဲနဲ့ Zip ဆိုတဲ့ ဖိုင်​​​လေး​တွေနဲ့လာတက်​ကြပါတယ်​။ အဲ့လိုမျိုးဖိုင်​​တွေနဲ့လာတဲ့အခါ မိမိဖုန်​းထဲမှာပါတဲ့ file manager လိုမျိုး အပ်​ပလီ​ကေးရှင်​း​တွေနဲ့​ဖွင်​့လို့ရ​ပေမဲ့ တချို့ zip ဖိုင်​​တွေက password…
ကင်မရာ ၄ လုံးပါတဲ့ Galaxy A9 က ဖုန်းတစ်ခုထက်ပိုကြောင်းပြောလာတဲ့ Samsung
November 30, 2018 MoonSmartphone NewsNo Comment on ကင်မရာ ၄ လုံးပါတဲ့ Galaxy A9 က ဖုန်းတစ်ခုထက်ပိုကြောင်းပြောလာတဲ့ Samsung
Samsung က A9 ကို ဖုန်းတစ်ခုထက်ပိုတယ်လို့တောင် ညွှန်းထားတဲ့ ပုံကို ကြည့်ရရင် တကယ်ပဲ ဖုန်းတစ်ခုထက် ပိုမယ့်ပုံပါပဲ။ A9 အကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားရင် ဆက်ပြီး ဖတ်ကြည့်သွားပေးပါနော်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့တုန်းက ကင်မရာ ၄…
Samsung ရဲ့ 10th Anniversary မှာ Beyond X ကို ထုတ်ပြမှာလား?
November 29, 2018 minn2unSmartphone NewsNo Comment on Samsung ရဲ့ 10th Anniversary မှာ Beyond X ကို ထုတ်ပြမှာလား?
Galaxy S10 ကတော့ စောင့်မျှော်နေတဲ့သူတွေကို တစ်စတစ်စ ပိုပြီးအငြင်းပွားစရာဖြစ်အောင် လုပ်နေသလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီ S10 ဟာ အခုနှစ်အတွက် Samsung ရဲ့ အကြီးဆုံး Update တစ်ခုအနေနဲ့ ရှိနေပါတယ်။ သတင်းပေါက်ကြားမှုတွေအရ ဒီဇိုင်းပုံစံ…
November 29, 2018 November 29, 2018 Ko HtetReviewsNo Comment on အင်္ဂလိပ်​စကား​ပြော​လေ့ကျင့်​နိုင်​မယ့် အပ်​ပလီ​ကေးရှင်း
Asia app ပရိတ်​သတ်​ကြီးနဲ့ ဒီတစ်​ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်​တာက အင်္ဂလိပ်​စကား​ပြောကို မိမိဖုန်​းထဲမှာတင်​ အလွယ်​တကူ​လေ့လာနိုင်​မယ်​့ Speak english ဆိုတဲ့ andriod အပ်​ပလီ​ကေးရှင်​း​လေးနဲ့ မိတ်​ဆ​က်ပေးမှာပဲဖြစ်​ပါတယ်။ တချို့သူ​တွေက သင်​တန်​းမှာ အချင်​းချင်​း​ပြောရမှာ မရဲ​သေး​တော့ သင်​တန်​းမတက်​ဖြစ်​ကြပါဘူး။ အဲ့လိုမဖြစ်​ရ​အောင်​ ဒီအပ်​ပလီ​ကေးရှင်​းထဲမှာပါတဲ့…
November 28, 2018 minn2unSmartphone NewsNo Comment on ဆိုးရွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ Apple
အသစ်ဖြန့်ချီလိုက်တဲ့ iPhone XR နဲ့ XS series ဟာ မျှော်မှန်းထားတဲ့ ရောင်းအားပမာဏကို မရောက်တဲ့အတွက် Apple ကုမ္ပဏီ အကြီးအကျယ်ဒုက္ခတွေ့နေပါတယ်။ Apple ကတော့ XR နဲ့ XS ရောင်းအားတက်အောင် Cash…
Spider-Man: Into the Spider-Verse အတွက် AR experience တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Sony
November 28, 2018 November 28, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on Spider-Man: Into the Spider-Verse အတွက် AR experience တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Sony
Marvel Entertainment, Columbia Pictures နဲ့ Sony Pictures တို့ပူးပေါင်းဖန်တီးထားတဲ့ “Spider-Man: Into the Spider-Verse” ဆိုတဲ့ animation ဇာတ်ကားလေးကတော့ လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြမယ့်အကြောင်းတော်တော်များများသိပြီးလောက်မှာပါ။ (ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ…
ဖုန်း storage တတ်နိုင်သမျှ ပြည့်မသွားအောင် လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၃)ခု
November 28, 2018 MoonFeaturesNo Comment on ဖုန်း storage တတ်နိုင်သမျှ ပြည့်မသွားအောင် လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၃)ခု
ဘယ်လို ဖုန်းအမျိုးအစားကို သုံးသုံး storage ပြည့်သွားတဲ့ ဒုက္ခကို လူတော်တော်များများ ကြုံတွေ့ကြရပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ဖုန်း storage ကို ထပ်ပြီး ပြည့်မသွားအောင် လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Storage ပြည့်ခြင်းက…
Android Device တစ်လုံးကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် Permission ပေးနိုင်တဲ့ SuperSu
November 27, 2018 minn2unReviewsNo Comment on Android Device တစ်လုံးကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် Permission ပေးနိုင်တဲ့ SuperSu
SuperSu(Super User) ဆိုတာ Root Access တွေကို စီစဉ်ပေးတဲ့ ကြားခံ App တစ်ခုပါ။ Root Acess ရှိပြီး Super User မရှိရင် Root Permission ပေးလို့မရပါဘူး။ Root…